Tsy any amin’ny fanakorontanana intsony izao… | NewsMada
Tsy any amin’ny fanakorontanana intsony izao…
Par Taratra sur 17/11/2020
Velona sy miaina ny firenena. Amin’izany, tsy maintsy ampandehanina ny raharaha. Tompon’andraikitra voalohany sy lehibe indrindra amin’izany ny fitondram-panjakana. Izay no ampindraman’ny vahoaka fahefana azy amin’ny fitantanana sy fampandrosoana. Na izany aza, ilaina hatrany ny hoe mpanohitra.
Arofanina na tsindry lentam-pahefana? Manao izay hampandeha ny raharaham-pirenena, araka ny tokony ho izy ihany koa izany. Tsy inona fa ny amin’ny fanatanterahana ireo fanamby nampanantenaina, fijerena ny olana sy ny hetahetam-bahoaka ary izay mahamaika azy, fitsinjovana mialoha izay mety hitranga…
Tsy izay no ilaina ny mpanohitra? Manaitra ny mpitondra tsy hibirioka any amin’ny tsy izy, mitsikera raha misy ny tsy mety na tsy mahomby, mitondra ny hetahetam-bahoaka… Tsy vitan’izay, manolo-kevitra ho amin’ny soa iombonana. Iaraha-manana ny raharaha, na tsy iaraha-mizaka azy ny fahefam-panjakana.
Tena fitiavan-tanindrazana sy fitsinjovana ny fiainam-bahoaka ve no manetsika sy manesika ny tsirairay amin’izany? Tsaraina amin’ny asany ny mpitondra: inona no vita na tsia? Eo ny vahoaka mitsara amin’izay fampandrosoana sitrahiny, raha misy na tsia ny fihatsaram-piainana tsaratsara kokoa no ho ny teo aloha.
Eo koa ny mpanohitra mitsara, mitsikera, manolo-kevitra… Mby aiza? Raha misy ny zava-tsy mety na tsy mahomby eto amin’ny firenena, takina ny tolo-kevitra ny mpanohitra ho amin’ny fanarenana. Raha tsy misy ny fiovana sy fanovana, anjaran’ny mpanohitra ny mandresy lahatra ny vahoaka hifidy azy amin’ny manaraka.
Tena mba manao izany ve ny mpanohitra? Eo ny vahoaka mijery, mihaino, mitsara… Inona ny sosokevitra amin’izay asa tsy vita na tsy mahomby amin’ny fomba fiasan’ny mpitondra hatrany ifotony, ohatra? Tsy vitan’ny fanakorontanana izay mitranga sy atao rehetra fotsiny ny raharaha. Efa tsy amin’izany intsony izao.
Efa mba misy fiovana sy fanovana ve ny fomba fanaovana politika? Eo ny vahoaka mitsara…